DEGDEG: Xildhibaan ku baaqay in lahubeeyo dadyowga deegaanka. – Kismaayo24 News Agency
DEGDEG: Xildhibaan ku baaqay in lahubeeyo dadyowga deegaanka.
by admin 20th January 2020 20th January 2020 0137
Deegaano katirsan Gobolka Waqooyi bari dalka Kenya ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku batay weerarada ay ka fulinayaan dagaalyahanada Al Shabaab , waxaana deegaanadaasi dadka kunool lasoo darsay cabsi xoogan.
Macalimiinta Kenyanka ah ee wax ka dhigi jiray Iskuulada kuyaala gobolka Waqooyi bari dalka Kenya ayaa bilaabay in ay halkaasi isaga cararaan, kadib markii weerar lagu dilay macalimiin wax ka dhigayay iskuulo kuyaala duleedka Gaarisa iyo deegaano kale.
Magaalada Gaarisa waxaa lagu qabtay kulan looga arinsanayay sida looga hortagi karo weerarada Al Shabaab ka fuliyaan gobolka Waqooyi Bari, waxaana kulanka ka qeyb galay Xildhibaano, Hogaamiyaal iyo siyaasiyiin gobolka kasoo jeeda.
Xildhibaan Maxamed Daahiye oo katirsan Baarlamaanka dalka Kenya ayaa sheegay in hada kadib aysan isku haleyn doonin ciidamada amaanka ee Kenya, waxa uuna sheegay in laga shaqeyn doono in dadka deegaanka la hubeeyo si Al Shabaab isaga difaacaan.
‘Waxaa la go’aansaday in ma’suuliyiiinta Ismaamul Goboleedka iyo shacabkuba ay qeyb ka noqdaan sugidda amniga, waxaa la hubeeynayaa shacabka oo la tabarayaa si ay ula dagaalamaan nimankan argagixida ah oo dhibka badan nagu haya”.ayuu yiri Daahiye.
Al Shabaab ayaa weeraro badan ka fulisay deegaano kuyaala gobolka Waqooyi bari Kenya, waxa ayna Al Shabaab inta badan weeraraan ciidamada booliiska iyo sidoo kale dadka aan Muslimka aheyn ee kunool gobolkaasi.
Gaalkacyo oo looga dhawaaqay Xildhibaano Cusub oo Galmudug ah Akhriso Magacyada Iyo Qabiiladooda
admin 28th July 2018
Daawo: Dowladda Soomalia oo ka qeyb gashay Shir looga Hadlaayay Arimaha Qudus oo ka dhacay Qahira
Daawo: Madaxweyne Farmaajo “Xabad joojin degdeg ah hala sameeyo, dhiiga daadanayana hala baajiyo”